पृथ्वीनारायण शाहदेखि कमल थापासम्मको राष्ट्रवाद - Nepali Online News Media-shikharnews.com
जुन बेला देश कमजोर बन्न थाल्छ त्यस बेला त्यहाँ राष्ट्रियताको बहस हुन थाल्छ । त्यतिखेर नेता धनी र नामी हुन पनि सक्छस तर त्यस अवस्थामा देश र जनताको स्थिति कारूणिक बन्दै गएको हुन्छ । अनि त्यसै घडी राष्ट्रियताप्रतिको जनलहर बढ्दै गएको पनि हुन्छ । आज हाम्रो देशमा ठीक यस्तै अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । अहिले हाम्रो देशमा सङ्कटको सृजना हुन थालेको छ, त्यसैले चारैतिरबाट राष्ट्रियताका सारङ्गी पनि रेटिन थालेका छन् ।
आज हाम्रो नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियताउपर सङ्कट परिरहेको बेहोरा तमाम नेपालीलाई थाहा छ । आजको नेपालको दुखद अवस्था एउटा कारूणिक उपन्यासजस्तै देखिन थालेको छ । यहाँ जनताका लागि जनताबाट शासन चलाइने विधिविधान पनि छ । तर जनभोट जित्नेहरू भने प्रायस् नेपालवादी हुनै सकेनन् भन्ने गुनासाहरू पनि आउन छाडेका छैनन् ।
राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि उनी जनप्रियताका पात्र भए । अनि उनका शासनकालमा भएका राम्रा र नराम्रा सबै बेहोरा एउटै खालमा राखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहण गरे, तर उनीमा राजकाजबारेको ज्ञान, सीप र अनुभव नै थिएन । त्यसैले उनका छेउछाउकाहरूबाट राजकाजको शैलीलाई बाँदरका हातमा नरिवल बनाउने कसरत भयो । त्यसमाथि आफ्ना छोराको विविध घृणित कृत्यका कारण थपिँदा राजा ज्ञानेन्द्र डरलाग्दो आलोचनाका पात्र भए । एकातिर राजा अक्षम हुनु र अर्का्तिर उनका छोराप्रति जनघृणा सिर्जना हुनाले राजतन्त्र मास्नेहरूका लागि काखी बजाउने अवसर प्राप्त भइरहेको थियो । त्यसै बखत भारतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपालमा गणतन्त्र भित्रिन पुग्यो । अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्रकै जहाज डुब्ने खेलको सुरूवात हुन थालेको थियो । छिमेकी मित्र राष्ट्रबाटै राजा ज्ञानेन्द्रलाई जवर्जस्ती गुन्टा कस्न लगाइनाले हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वाधिनता र हाम्रो राष्ट्रवादप्रति पहिरो जानेक्रम जारी नै भयो । त्यस प्रकरणमा जनताहरूले यो जित कसको ? जनताको ! भनेर नारा पनि लगाए । तर राजतन्त्रको पतन नै राष्ट्रियताको हार थियो । राष्ट्रियताको कारणले नेपालमा गणतन्त्रको जित पनि हुन सकेन ।
नेपालको वर्तमान सवालमा राजालाई नै राष्ट्रियताको सग्लो बिम्बका रूपमा स्वीकार्नु पर्ने अवस्थाको पुनस् सृजना भएको छ । जसरी खडेरी परेको बेला एक झर पानीको पनि अति महत्व हुन्छ, त्यसरी नै राष्ट्रियताको सङ्कटको अवस्थामा एक जना सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता खटकिएको हुन्छ ।
कमल थापासँग म झन्नै पचास वर्षदखि सँगसँगै छु । उनको राजनैतिक छवि मैले त्यस बेलादेखि यस बेलासम्म एकोहोरो हेर्दै आएको छु । उनी देश, नरेश र नेपाली जनताबाट कहिल्यै पर गएको मलाई थाहा भएन । यति हो, राजाले गल्ती गरेको कुनै बेहोरालाई उनले सकारेनन् होला । अथवा कुनै घडी राजासँग चित्त दुखाएर उनी केही पर पनि सरे होला । तर राष्ट्रप्रति उनको त्यही कमजोरी होइन । वास्तवमा उनी एक जना दुरदर्शी राजनेता नै हुन् । उनी राजधर्म्भित्रका ज्ञानले भरिपूर्ण व्यक्तित्व पनि हुन् । राजाको राजकाजका छेउ र दलबलको शासनमा बसेर उनले जति ज्ञान, अनुभव र सीप हाँसिल गरे त्यति दक्ष, बौद्धिक र परिमार्जित राजावादी, जनवादी र हिन्दूवादी राजनीतिज्ञ मैले अरू देखेकै छैन भने पनि हुन्छ । मैले थाहा पाएदेखिकै कुरा गर्ने हो भने कमल थापाका मुटुमा सधैं राजसंस्था र हिन्दूधर्म नै प्रमुख रूपमा विराजमान छ । यस बाहेकका सम्झौतामा बरू उनी मर्न तयार हुन्छन् तर विचलित हुँदैनन् । राष्ट्रियताका दृष्टिकोणबाट पनि भन्ने हो भने उनी फलाम जस्तै बलिया छन् । मानौँ उनी हर्कुलस् हुन् ।
हाम्रो राष्ट्रियताको परिवेशमा राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा अर्को मन्त्र थियो( ‘मेरा साना दुस्खले आर्ज्याको मुलुक होइन, यो सबै जातको साझा फूलबारी हो ।’ यस मन्त्रलाई पालन गर्ने राष्ट्रवादी शक्ति अहिले कोही देखिन्छन् त ? विशाल साझा फूलबारी नामक हाम्रो मुलुक अहिले प्रायस्को कोठेबारी भएको छ । साथै सङ्घीयताका नाउँमा पनि यस मुलुकलाई चिरैचिरा पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
‘नइ प्रकाशनʼ तथा ‘त्रिमूर्ति निकेतनʼका संस्थापक नरेन्द्रराज प्रसाई गीतकार, निबन्धकार तथा जीवनीकार हुनुहुन्छ ।
कोरोना संक्रमण रोक्न चिनियाँ मोडल अपनाउने तयारीमा नेपाल
३ लाख ३६ हजार बढी संक्रमित, चीनमा शून्य, यी ५ देशमा महामारी
कोरोना संक्रमण झन् तीव्र बनेकाे भन्दै डब्लुएचओकाे चेतावनी